Ityoophiyaan, yaadni haaraan Gibts dhiyeessite fudhatama hin qabu jette – Fana Broadcasting Corporate
Ityoophiyaan, yaadni haaraan Gibts dhiyeessite fudhatama hin qabu jette
Finfinnee, Fulbaana 7, 2012 (FBC) – Ityoophiyaan, Gibts guutinsa bishaanii Hidha Haaromsaarratti yaadni dhiyeessite, fudhatama hin qabu jette.
Ministirri Ministeera Bishaan, Jallisii fi Iinarjii Dooktar Injiinar Silashii Baqqalaan walga’ii Sanbataa fi Dilbata dhimmicharratti magaalaa Kaayrootti gaggeeffamerratti har’a ibsa miidiyaalee laataniiru.
Ministirichi akka beeksisanitti walga’ii ministiroota dhimma bishaanii Ityoophiyaa, Sudaanii fi Gibts gaggeeffame kanarratti Gibts guutinsa bishaanii hidhichaarratti yaada haaraa mataa ofii dhiyeessiteetti.
Biyyattiin guutinsi bishaanii waggaa 7n akka ta’u yaada dhiyeessiteetti.
Ityoophiyaan waggaatti bishaan meetir kiyuubii biiliyoona 40 akka gadhiistu gaafatteetti.
Dabalataan ammeentaan bishaan Hidha Aswaan ol ka’iinsaa ol meetira 165 ol yoo ga’u, hojiin hidhichaa bishaan gadhiisuu qofa akka ta’u gaafatteetti.
Ityoophiyaan gama isheetin yaadichi waliigaltee itti fayyadama bishaanii Abbaay kanaan dura mallatteeffame kan cabse jetteetti.
Yaadichis faayidaa Ityoophiyaa dabarsee kan laatu waan ta’eef fudhatama hin qabu jedhaniiru.
Manne Barnoota Giiftii duree aadde Zinnaash Taayyaachawn ijaarsiisan keessaa 4 hojii…
Ibsa Mana Maree ADWUI irraa kenname
MM Dr Abiy badhaasa Heesan Yuuroo kuma 25 argatan projeekti dargaggoota gaariif…
Ogeessi humna elektirikii akka tasaa gadi dhiifameen lubbuun darbe
Koreen giddu galeessaa ODP murteewwan dabarsuun…
Turki Kaaba Sooriyaatti waliigalte dhukaasa dhaabu yeroo…